မယ်ဇလီဖူးသုပ် | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
မယ်ဇလီဖူးသုပ် ကိုတင်ပေးပါဆိုလို.အရင်ပုံပောာင်းတွေရှာမတွေ.တာနဲ.ရုံးပိတ်ရက်မှာ Peninsular သွားပြီးမယ်ဇလီဖူး ရှာပြီးဝယ်ပြီးသုပ်ရပါတယ်..မယ်ဇလီဖူးကို တန်ဆောင်တိုင်လပြည်.ညမှာဆေးပေါင်းခတယ်ဆိုပြီး သုပ်စားကြပါတယ်..
မယ်ဇလီဖူး - 100 g
ကြက်သွန်နီတစ်လုံး ကိုပါးပါးလှီးပြီး ရေစိမ်ထားပါ။
ဆား၊ အရသာမှုန်.- ငံပြာရည်- အနဲငယ်စီ၊
ကြက်သွန်ဖြူ၊နီဆီချက်- ထမင်းစာဇွန်း ၂ ဇွန်း၊
ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း - ထမင်းစာဇွန်း ၁ ဇွန်း၊
နှမ်းလှော်.. ထမင်းစာဇွန်း ၁ ဇွန်း၊
မန်းကျဉ်းမှည်. - ထမင်းစာဇွန်း ၁ ဇွန်း၊
မယ်ဇလီဖူးကိုရေဆေးပြီး ရိုးတံ နှင့်အရင့်တွေဖယ်ပြီး ပြုတ်ပါ …၁၀ မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီး ၊ ရေသွန်ပြီး ရေသစ်လဲပြီး မန်ကျဉ်းမှည်. ထည်.၁၀ မိနစ်ထပ်ပြုတ်ပြီး ရေစစ်ပြီး မညှက်တညှက်ထောင်း ပြီး ပါးပါးလှီးထားသောကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊အရသာမှုန်. ငံပြာရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီဆီချက်၊ပုဇွန်ခြောက်ထောင်း၊ မြေပဲလှော်ထောင်း၊ နှမ်းလှော်တို.ကိုထည်.ကာသံပုရာရည် ညှစ်ထည်.ပြီး သမအောင်နယ်ကာ သုံးဆောင်လို.ရပါပြီရှင်
Myanmar Foods & Other